कृषि फार्मलाई ५६ लाख १५ हजार अनुदान::Online News Portal from State No. 4
कृषि फार्मलाई ५६ लाख १५ हजार अनुदान
बागलुङ, १७ वैशाख – गलकोट नगरपालिका भित्रका विभिन्न कृषि फार्महरुलाई अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ । गलकोट नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतबाट नगरपालिका भित्रका विभिन्न कृषि फार्महरुलाई ५६ लाख १५ हजार अनुदान प्राप्त भएको हो ।
गलकोट नगरपालिका वडा नं ९ को अशोक कृषि फार्मलाई १ लाख ९० हजार गलकोट नगरपालिका वडा नं. १ मा रहेको मगरात एकिकृत कृषि फार्म र सौगात कृषि फार्मको लागि २ लाख २० हजार गलकोट नगरपालिका वडा नं. ९ को उपहार कृषि फार्म र सापकोटा कृषि फार्मको लागि १ लाख ९० हजार, गलकोट नगरपालिका वडा नं. २ नरेठाँटीमा रहेको बेबी ताजा तरकारी फार्मको लागि १ लाख ९० हजार, देउराली कृषक समुहको लागि ६ लाख ५५ हजार गलकोट नगरपालिका वडा नं. १ मा रहेका काफलडाँडा गुरुङ कृषि फार्म, ओम कृषि फार्म को लागि ६ लाख ५५ हजार र बेसी कृषि तथा पशुपालन फार्म र चौराहा कृषि तथा पशुपालन फार्मको लागि २ लाख प्राप्त भएको छ । च्याउ खेतीको लागि वडा नं. १ का प्रेमबहादुर खड्का, २ का हिरा बहादुर पुन, ३ का अनिल नेपाली र ९ का कृषक अग्निधर सापकोटालाई २५ हजार प्राप्त भएको छ
। नवजागरण कृषि सहकारीका लागि ३ लाख ५० हजार अनुदान प्राप्त भएको छ । त्यस्तै मकै पकेटको लागि २ लाख, सुन्तला पकेटको लागि २ लाख अलैचि पकेटको लागि २ लागि आलु पकेटको लागि गलकोट नगरपालिका वडा नं १ को लागि ५ लाख र आलु पकेट गलकोट नगरपालिका वडा नं. ८ को लागि ५ लाख अनुदान प्राप्त भएको गलकोट नगरपालिका कृषि तथा पशुसेवा शाखा प्रमुख चिन्तामणि शर्माले जनाकारी दिए ।